Nadwo 10aad oo caawa ka bilaabatay magaalada Boosaaso ee xarunta gobalka Bari(warbixin)
Boosaaso:-Waxaa caawa bacdal Maqrib ka bilaawday Magaalada Boosaaso ee xarunta gobalka Bari Nadwo cilmiyeed sanadla ah oo la qabto sanad walba bishan oo kale waxaana cinwaanka nadwada loogu magac daray (الدعوة السلفية في الصومال نحو انطلاقة رشيدة)waxaana Nadwada ka dhacay Masjidka Weyn ee Al-Rowda .
Nadwadan ayaa waxaa ka qeyb gali doona culumo ku sugan dhamaan Bosaaso iyada oo habeen walba bacdal Maqri ay ka bixi doonto hal muxaadaro ,caawa ayaa waxaa muxaadarada ugu horeysay jeediyey Fadiilat Sheekh Bashiir Ahmed Salaad waxaana uu ka hadlay .Manhajka Islaax wataqyiir Cinda Ahlu suna waljamaaca .
Nadwadan ayaa socon doonta mudo Todobo casho ah kana bilabaneysa 19-4-2012 kuna ekaan doonta 26-4-2012 , nadwada ayaa lagu wadaa in ay ka qeyb galaan Culimo kala duwan
Nadwada waxaa si rasmi ah u furay xidhiidhiyaha nadwada Sheekh Faarax Maxamed Cajab saacadu Markey ahayd 6:27PM (Makka Time or GMT+3hrs), hadalka furitaanka ah ka dib waxaa Aayaad quraan ah akhriyay C/raxmaan C/waaxid Deeq , kadib waxaa kalmada furitiinka logu soo dhaweeyay Sheekh Xasan Xuseen Maxamed.
Sheekh Xasan Xuseen waxa uu ugu horeyn sheegay in dadka muslimka ah looga baahan yahay in ay ka faa’iideysataan arimahadooda diineed waxa qof kastaa laga doonayaana ay tahay in uu Diinta Alle SW ay tahay in uu u qaato sida ay tahay waxa dadka oo dhan laga doonayaana ay ugu horeyso u gar gaaridda iyo sare u qaadida Diinta Alle ,Sheekhu waxa uu Alle ka baryay in kheyra iyo wanaaga dadka waafajiyo wuxuna si gaar ah ugu mahad celiyay gudiga soo qaban qaabiyay kulan cilmiyeedka inta uu socdo iyo kuwii horey u soo qaban qaabin jirayba .
Klamada labaad waxa la siyay Sheekh C/rashiid Sheekh Saalax ,ugu horeyn waxa uu sheegay in ay sharaf u tahay laguna karaameeyay ka qeyb galidda furidda nadwada caawa ,kadib waxa uu sheegay in waanada iyo wax isku sheegiddu ay tahay midda kaliya ee dadku wax isugu sheegi karayaan waxa dadka laga doonayaana ay tahay in ay qaataan waxa loo sheego kuna camal falaan.
Kadib intaa waxa uu Sheekh Faarax Maxamed Cajab faah faahin kooban ka bixiyay xiligii ay soo bilaabatay Nadwooyinkii lagu qabtay masjidka Al Rowda taasi oo soo bilaabatay sanadii 2003-dii wuxuuna si guud uga hadlay mowduucyadii looga hadlay kulan cilmiyeedyadii hore ama la soo gudbay ilaa iyo laga soo gaadho tan caawa oo ah tii tobnaad.
One comment on “Nadwo 10aad oo caawa ka bilaabatay magaalada Boosaaso ee xarunta gobalka Bari(warbixin)”
Salaaaaaaaaaaaan on April 19, 2012 at 7:16 pm said:
Aad iyo aad ayaan ugu Faraxsanahay Nadwadaan Sharafta Mudan leh waxaanan si khaasa u wada salaamayaa dhammaan Culimada ka qeyb qaadaneysa Nadwadaaan